OPPO ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီ | OPPO မြန်မာ
နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည့် ရက်စွဲ- ဇူလိုင်လ 24 ရက်၊ 2019
Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (18 Haibin Road၊ Wusha၊ Chang'an Town၊ Dongguan တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည်) နှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ (ဤမှစ၍နောင်တွင် "OPPO"၊ "ကျွန်ုပ်တို့"၊ သို့မဟုတ် “ကျွန်ုပ်တို့ကို” ဟု ရည်ညွှန်းထားပါသည်) သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို လေးစား၍ ကာကွယ်ပေးရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဆိုသည်မှာ မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားထားသည့် သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားနိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပြီး အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ နည်းလမ်းနှင့် အတိုင်းအတာ၊ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်သည့် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ) ကို အသုံးမပြုမီနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မပေးပို့မီ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာရန် ဤသီးသန့် မူဝါဒကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှုပါ။
ဤမူဝါဒသည် အောက်ပါတို့ကို သင်နားလည်လာအောင် ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့ စုစည်းရယူ၍ အသုံးပြုပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူအတွက် အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်စေရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းရယူသည့် နည်းလမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။ (1) ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသော အချက်အလက်များ၊ (2) သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူထားပါသည်နှင့် သို့မဟုတ် (3) ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သင့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူသည့် အချက်အလက်များသည် သင်အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ)၊ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် ဆက်တင်များနှင့် သင်အသုံးပြုသော ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အပါအဝင် သင်ပြုလုပ်သည့် ရွေးချယ်မှုများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အဓိက လုပ်ငန်းများနှင့် တန်ဖိုးမြှင့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူရာတွင် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား မဖြစ်မနေ ပံ့ပိုးပေးရန် မလိုပါ။ အဓိက လုပ်ငန်းများအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ပံ့ပိုးမပေးရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အား သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် သင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသည့် ပြဿနာမှန်သမျှအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးမြှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူခွင့် ပြုမည်၊ မပြုမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပံ့ပိုးပေးခြင်းကို ငြင်းပယ်လိုက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးမြှင့် လုပ်ငန်းများကို သုံးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း အဓိက လုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုမှုအပေါ် ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းဖုန်း ပါကင်ဘူးပေါ်တွင် မှတ်သားထားသော ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့် နေရာသည် ဖုန်းကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုသည့်နေရာဟု မှတ်ယူလေ့ရှိပြီး ဒေတာကာကွယ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများ အပါအဝင် ဒေသတွင်း ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း မှတ်သားထားသင့်ပါသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
(1) ကျွန်ုပ်တို့အား သင်တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးသော အချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု အချို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အချက်အလက်များ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန် လိုပါသည်။ ဥပမာ -
a. အာမခံကတ်/ အီလက်ထရောနစ် အာမခံကတ် (ဤမှစ၍ နောင်တွင် အာမခံကတ်" ဟု ရည်ညွှန်းထားပါသည်) တွင် အချက်အလက်များကို သင်ဖြည့်စွက်သောအခါ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပေးရန်တောင်းဆိုပါမည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ စက်အထောက်အထားကုဒ်၊ အမျိုးအစား အစရှိသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
b. သင်က ထုတ်ကုန်များကို မှာယူပါက၊ ပစ္စည်းပြန်ပို့ရန် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေရယူရန် လျှောက်ထားပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အခပေး ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အော်ဒါကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သင်၏ ပစ္စည်းပေးပို့မှု အသေးစိတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်၊ ခရက်ဒစ်ကတ် အသေးစိတ်၊ ငွေတောင်းခံရန် လိပ်စာ၊ ခရက်ဒစ် စစ်ဆေးမှုအတွက် အချက်အလက်များနှင့် အခြားငွေကြေး အချက်အလက်များ၊ အဆက်အသွယ်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု မှတ်တမ်းများ အစရှိသည်တို့ကို စုစည်းရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များကို သင်က ပံ့ပိုးမပေးလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ထုတ်ကုန်များ မှာယူခြင်း၊ ပစ္စည်းပြန်ပို့ရန် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေရယူရန် လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အခပေး ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
c. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအချို့တွင် သင်သည် အကြောင်းအရာများကို အခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆို၍ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုထားသည့် နည်းပညာအရ ထိုကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများနှင့် မျှဝေထားသည့် အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်ပြီး စနစ်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
d. မျက်နှာသွင်ပြင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် လက်ဗွေရာဖြင့် လော့ခ်ဖြေခြင်းက သင်၏ ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် မျက်နှာသွင်ပြင် သို့မဟုတ် လက်ဗွေရာ အချက်အလက်များကိုသုံး၍ သင့်စက်ကို အမြန်လော့ခ်ဖြေနိုင်စေပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင်သည် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ရိုက်ကူးထားသည့် သင့်မျက်နှာသွင်ပြင် အင်္ဂါရပ် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သင့်လက်ဗွေရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါမည်။
e. အသံညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြား အသံဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အသံကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာများတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
f. သင့်အတွက် ရောင်းချပြီး နောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် သုံးစွဲသူ အကူအညီကို ပံ့ပိုးပေးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် IMEI နှင့် အခြားစက် အချက်အလက်များ၊ သင့်အမည်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ လိပ်စာ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို စုစည်းရယူနိုင်သည့်အပြင် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုဌာနကြား ဖုန်းပြောဆိုမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါသည်။
g. ထီကံစမ်းမှု အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များက စီစဉ်လုပ်ဆောင်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သောအခါ၊ မေးခွန်းလွှာများတွင် ဖြည့်စွက်သောအခါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များက ပံ့ပိုးကူညီသော သုံးစွဲသူ ဆွေးနွေးပွဲများ သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်များတွင် ပါဝင်သောအခါကဲ့သို့ အခြားအခြေအနေများတွင် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို စုစည်းရယူနိုင်ပါသည်။
h. OPPO ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အချို့၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်များအပေါ် မူတည်၍ အခြားသော အခြေအနေများတွင်လည်း သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို စုစည်းရယူနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စရပ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၏ သီးခြား သီးသန့် မူဝါဒတွင် သင့်ကို အသိပေးပါမည်။
(2) သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူထားပါသည်။ OPPO ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ အပါအဝင် သင့်စက် အချက်အလက်များနှင့် OPPO ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် သင်၏ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါမည်။
a. စက်အချက်အလက်များ - စက်အမည်၊ အမျိုးအစား၊ ဒေသနှင့် ဘာသာစကား ဆက်တင်များ၊ စက်အထောက်အထား ကုဒ်၊ စက်ဟာ့ဒ်ဝဲ အချက်အလက်နှင့် အခြေအနေ၊ သုံးစွဲမှု အလေ့အထများ၊ IP လိပ်စာ၊ Mac လိပ်စာ၊ လုပ်ဆောင်မှု စနစ် ဗားရှင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲရန် အသုံးပြုထားသည့် စက်၏ စီစဉ်သတ်မှတ်မှုကဲ့သို့။
b. စာရင်းအချက်အလက်များ - ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသည့်အချိန်နှင့် အသုံးပြုသည့်ကြာချိန်၊ ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ရိုက်ထည့်ထားသည့် ရှာဖွေမှု စကားရပ်များနှင့် စက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်စဉ်များ (ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်နှင့် ပျက်ယွင်းခြင်းကဲ့သို့) အကြောင်း အချက်အလက်များကဲ့သို့။ သင့်စက်ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပျက်ယွင်းမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ထိုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားချိန်ရှိ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ထည့်သွင်းပေးရန် Android စနစ်ကို ဒီဇိုင်းဖန်တီးထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များကို ချို့ယွင်းချက် စာရင်း ဆန်းစစ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မည်သူမည်ဝါခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူထားသည့် စာရင်းများကို ပုံမှန် ရှင်းလင်းလေ့ရှိပါသည်။။
c. တည်နေရာ အချက်အလက်များ - စက်၏ GPS လိုင်း သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ Wi-Fi ဝင်ရောက် သုံးစွဲခွင့်ပွိုင့်များနှင့် ဆဲလ်တာဝါတိုင်များနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များ၊ စက်တည်နေရာ ID နှင့် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရေးကုမ္ပဏီ၏ ID ကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်မည်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် တည်နေရာ အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများကို ဖွင့်လိုသည်ကို မေးမြန်းပါမည်။ သင်သည် OPPO သို့ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် တည်နေရာ အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲရန် စက်ဆက်တင်များမှနေ၍ သင့်စက်၏ တည်နေရာ ဆက်တင်များကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သင်သည် တည်နေရာ အခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများက အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆာဗာများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပိတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် တည်နေရာ အချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
d. အဲလ်ဘမ် အချက်အလက်များ - ဥပမာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည့် တည်နေရာများကို ပြသရန်အပြင် သင့်ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို အမျိုးအစားခွဲရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များ၏ လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ် အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူရန် လိုပါသည်။ သင်က ဓာတ်ပုံအချို့ကို ရှာဖွေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင် ရိုက်ထည့်ထားသည့် စကားရပ်များနှင့် စက်တွင်းတွင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် ဓာတ်ပုံအရေအတွက်ကို စုစည်းရယူပါမည်။
e. ကင်မရာ - ကင်မရာအက်ပ်က ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ (ဥပမာ သင်က အက်ပ်ကို အသုံးပြုသည့် အကြိမ်ရေ)၊ သင့်စက်အကြောင်း အချက်အလက်များ၊ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက်ဘောင် အချက်အလက်များ (ဓာတ်ပုံ၏ အလင်းတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် ရိုက်ကူးထားသည့် မျက်နှာအရေအတွက်ကဲ့သို့) နှင့် သင့်ဖုန်းတွင် ကျန်ရှိသော သုံးနိုင်သည့် နေရာလွတ် အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါမည်။
f. အသုံးပြုနေသည့် အပလီကေးရှင်းဗားရှင်း၊ သင် သွားရောက်ခဲ့သည့် ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများက ပံ့ပိုးပေးသည့် အကြောင်းအရာကို သင်မည်သို့ တုံ့ပြန်ပုံကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားအချက်အလက်များ။
g. OPPO ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်များအပေါ် မူတည်၍ အခြားသော အခြေအနေများတွင်လည်း သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို စုစည်းရယူနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စရပ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၏ သီးခြား သီးသန့် မူဝါဒတွင် သင့်ကို အသိပေးပါမည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူများနှင့် တွဲဖက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကို မှတ်သားပါ။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား အသံမှ စာသား ပြောင်းလဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူကို တာဝန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပံ့ပိုးသူသည် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် အချို့ကို လက်ခံရရှိ၍ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ဤအချက်အလက်ကို အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။
(3) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ရယူသည့် အချက်အလက်များ
OPPO ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့၏ လက္ခဏာရပ်များအပေါ် မူတည်၍ ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် အများသုံး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးသုံး ရင်းမြစ်များမှ သင့်ဒေတာများကို ရယူနိုင်သည့်အပြင် ထိုအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိထားသည့် သို့မဟုတ် သင်နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားအချက်အလက်များတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်များ (HeyTap၊ QQ၊ WeChat၊ Alipay၊ Weibo၊ Facebook စသည်) ၏ အကောင့်တစ်ခုကို သုံး၍ ဆိုင်းအင်ဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုများမှ သင်၏ သုံးစွဲသူအမည်နှင့် ကိုယ်စားပြုပုံကဲ့သို့ သင်၏ အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့အသုံးပြုပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စာချုပ်အရ သင့်ကို လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အခြားဥပဒေအရ လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုသောအခါ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်သောအခါ ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဤသီးသန့် မူဝါဒနှင့် ၎င်း၏ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာနှင့်အညီ တစ်သွေမတိမ်း အသုံးပြုပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။
• အော်ဒါများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ဒါများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူ အကူအညီ၊ အော်ဒါ ပို့ဆောင်မှု၊ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလွှာ ပရင့်ထုတ်ခြင်း စသည်တို့ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အဆိုပါ ဒေတာများကို အသုံးပြုပါမည်။
• အသိပေးချက်နှင့် အလိုအလျောက် ပေးပို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်။ လုပ်ဆောင်ချက် စနစ်များ သို့မဟုတ် အက်ပ်များ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်း၊ ရောင်းချမှုများနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှု အချက်အလက်များ အပါအဝင် OPPO အကြောင်းအရာ အလိုအလျောက် ပေးပို့မှု သို့မဟုတ် အသိပေးချက် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• တည်နေရာ အခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသော သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မိုးလေဝသ အချက်အလက်များ၊ မြေမျက်နှာပြင် တည်နေရာအလိုက် ပစ်မှတ်ထားသည့် OPPO မက်ဆေ့ချ် အလိုအလျောက် ပေးပို့မှု ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ ပိုမိုပစ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလိုအလျောက် အချိန် စီစစ်ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန် တည်နေရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။
• ထုတ်ကုန်များနှင့် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အော့ဖ်လိုင်း အရောင်းချန်နယ်များ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများကို လေ့လာဆန်းစစ်မှု သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများထံ ပြန်လည်သွားရောက်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ် အော်ဒါဖောင်များမှတစ်ဆင့် ရယူထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချို့ယွင်းချက် စာရင်း ဆန်းစစ်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် ပျက်ယွင်းမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ အစီအစဉ်တွင် သင်ပါဝင်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံနှင့် ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှု လုပ်ဆောင်ရန် သင့်စက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အပြုအမူ၊ တည်နေရာ၊ စာရင်းနှင့် အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူပါမည်။
• သုံးစွဲသူ အကူအညီကို ပံ့ပိုးပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန်၊ သုံးစွဲသူများ၏ စက်များကို ပြုပြင်ပေးရန်နှင့် အခြား သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အလေးထား ကူညီမှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဒေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။ သင့်အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တိကျသော ဆော့ဖ်ဝဲ လိုင်စင်ကို သက်ဝင်လုပ်ဆောင်ရန် သင့်မိုဘိုင်းစက်၏ တစ်ခုတည်းရှိသော သီးသန့် အထောက်အထားကုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ “ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်” အပိုင်းတွင် သင်ပို့စ်တင်ထားသော မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ဖြေကြားပေးရန် သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာကိုလည်း စုစည်းရယူနိုင်ပါသည်။
• တစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပိုမိုသင့်တော်သော အချက်အလက်များ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြသရန်နှင့် ပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သုံးစွဲသူပရိုဖိုင်းများနှင့် အပြုအမူများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များကို အကြံပြုပေးရန် သင်က အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် အက်ပ်များကို ဖျက်ပစ်ခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းများကို App Market သို့ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိထားသည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံ အလုံးစုံကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းရယူထားသည့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။
• လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်မှု ကာကွယ်တားဆီးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အထောက်အထားကို စီစစ်အတည်ပြုရန်၊ လုပ်ငန်း၏ ထိရောက်မှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်၊ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် လိမ်လည်မှု ကာကွယ်တားဆီးရန် သင်ပံ့ပိုးထားသည့် ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ဒေတာများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါ ဒေတာများကို အသုံးပြုရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ချိတ်ဆက်ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။
• ကြော်ငြာအရောင်းမြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။ သင်သည် OPPO က ကျင်းပသော ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် အခြားအလားတူ အရောင်းမြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ အစီအစဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် သင်ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။
• အခြား OPPO ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ OPPO ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို အသုံးပြုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် သင့်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ Breeno Feed ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ၊ ပြက္ခဒိန် အချက်အလက်များကို ဖတ်ပြီး သင့်သဘောတူညီချက်ကို ရယူပြီးနောက် စမတ်အကြံပြုချက်များ၊ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် သုံးစွဲခွင့်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြမထားသည့် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုအတွက် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက သင်၏ သီးခြား သဘောတူညီချက်ကို ကြိုတင် ၏ရယူပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက သင်၏ သီးခြား ၏သဘောတူညီချက်ကို ကြိုတင် ၏ရယူပါမည်။ သုံးစွဲသူများ၏ သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် အပြုအမူ ဒေတာများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ပံ့ပိုးပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့က ကွတ်ကီးများနှင့် အခြား အလားတူ နည်းပညာများကို မည်သို့အသုံးပြုပုံ
1. ကြတ္ကီးမ်ားဆိုတာ ဘာလဲ။
ကွတ်ကီးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများက သင့်စက်သို့ လွှဲပြောင်းကာ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဖိုင်အသေးလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ OPPO ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပြန်လှန်တုံ့ပြန်သော အက်ပ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့် ကြော်ငြာများသည် ကွတ်ကီးများနှင့် ပစ်ဇယ်တဂ်များနှင့် ဝဘ်ဘီကွန်များကဲ့သို့ အခြားအလားတူ နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများကို သင့်ကွန်ပျူတာတွင် အချိန်ခဏကြာ (ဥပမာ၊ သင့်ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်သည့်အချိန်မျှသာ) သို့မဟုတ် နှစ်ချီ၍ပင်ကြာသည်အထိ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ သတ်မှတ်မထားသည့် ကွတ်ကီးများကို ဝင်ရောက်မသုံးစွဲနိုင်ပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသည့် ကွတ်ကီးများ
(1) OPPO နှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်များသည် သင့်စက်တွင် မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ အသုံးပြုပုံ၊ အက်ပ်ကို သင်အသုံးပြုသည့် ကြာချိန်၊ အက်ပ်အတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်စဉ်များ၊ စုစုပေါင်း သုံးစွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဒေတာများနှင့် အက်ပ်ကို မည်သည့်နေရာမှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူခဲ့သည်တို့ကို ပိုမိုနားလည်နိုင်ရန် ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် အခြားအလားတူ ခြေရာခံနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေ့လာဆန်းစစ်မှု ဆော့ဖ်ဝဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် အချက်အလက်များကို မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင် သင်ပေးပို့ထားသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မည် မဟုတ်ပါ။
(2) OPPO နှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်များသည် အလားအလာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်၊ ဝဘ်ဆိုက်များကို စီမံရန်၊ ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံကို ခြေရာခံရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ် သုံးစွဲသူအုပ်စုအတွက် ပေါင်းစည်းထားသော လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူရန် ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် အလားတူ ခြေရာခံသည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။
(3) ဝဘ်ဘရောက်ဇာများစွာတွင် ခြေရာမခံရန် လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိပါသည်။ ၎င်းက " ခြေရာမခံရန် " တောင်းဆိုချက်များကို ဝဘ်ဆိုက်များသို့ ပေးပို့ပါသည်။ သင့်ဘရောက်ဇာတွင် ခြေရာမခံရန်ကို ဖွင့်ထားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်အားလုံးက ဤသတ်မှတ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
(4) ဝဘ်ဆိုက်အများစုကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပေါင်းထားသော အလားအလာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များကို စီမံရန် အချက်အလက်အချို့ကို အလိုအလျောက် စုစည်းရယူပါသည်။ ဤအချက်အလက်များတွင် အင်တာနက် ပရိုတိုကောလ် (IP) လိပ်စာ၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP)၊ ရည်ညွှန်း/ ထွက်ရန် စာမျက်နှာ၊ (HTML စာမျက်နှာများနှင့် ရုပ်ပုံများကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် သင် ကြည့်ရှုသည့် ဖိုင်များ၊ လုပ်ဆောင်မှု စနစ်၊ ရက်စွဲ/ အချိန် မှတ်တမ်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကလစ်နှိပ်၍ ကြည့်ရှုမှုဆိုင်ရာ ဒေတာများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
(5) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် ကြော်ငြာများ ပြသရန် သို့မဟုတ် အခြား ဝဘ်ဆိုက်များရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာများကို စီမံရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း မိတ်ဖက်များသည် သင်၏ လေ့လာကြည့်ရှုမှုများနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများအပေါ် အခြေခံပြီး သင့်ကို ကြော်ငြာများ ပြသပေးရန် ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် အလားတူ ခြေရာခံသည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင် စိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်သည့် ကြော်ငြာများအား ရရှိနေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုပါက ကွတ်ကီးများနှင့် ကွတ်ကီး လိုလားနှစ်သက်မှုများကို စီမံရန် ( အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ) "ကွတ်ကီးများကို ရှင်း/ ပိတ်" နိုင်ပါသည်။ အထက်ပါ ဝဘ်ဆိုက်များထဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ တိကျသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့် ယေဘုယျ ကြော်ငြာကို သင် ဆက်လက် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
3. ကွတ်ကီးများကို ရှင်းပစ်ခြင်း/ ပိတ်ခြင်း
ကွတ်ကီးများနှင့် ကွတ်ကီးအတွက် သတ်မှတ်ထားလိုသည်များကို သင့်ဘရောက်ဇာ၏ ရွေးချယ်စရာများ/ လိုလားနှစ်သက်မှုများ မျက်နှာပြင်မှနေ၍သာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် ရေပန်းစားသော ဘရောက်ဇာအချို့တွင် ကွတ်ကီးများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်များ ဖြစ်ပါသည်။
4. ကွတ်ကီးများအကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များ
ကွတ်ကီးများအကြောင်း အချက်အလက်များနှင့် ကွတ်ကီးများကို လေ့လာကြည့်ရှုရန်/ ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ထားရန် သင့်ဘရောက်ဇာကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပုံအကြောင်း ညွှန်ကြားချက်များကို သိရှိလိုပါကwww.allaboutcookies.org ကို ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားပုံ
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် ပို၍ကြာရှည်သော ထိန်းသိမ်းရန် ကာလကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားခြင်း မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် စုစည်းရယူသော ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရန် လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံး အချိန်ကာလတစ်ခုကြာအောင်သာ ထိန်းသိမ်းထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းရမည့် ကာလကျော်သွားချိန်တွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ပါမည် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါ မဖော်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပါမည်။
အထူး အကြောင်းရင်းများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အချို့ကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများက စုစည်းရယူပြီး စီမံဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများက တစ်နည်းနည်းဖြင့် သတ်မှတ်မထားလျှင် ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ပါမည် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါ မဖော်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို မည်သို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပုံ
1. အချို့သော အခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကို အပ်နှံထားပါမည်။ ဥပမာ စာသား မက်ဆေ့ချ်များ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်များ ပေးပို့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား နည်းပညာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးသော ကုမ္ပဏီများ။ ဤကုမ္ပဏီများသည် သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. OPPO သည် သင်တောင်းဆိုသည့် ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ တွဲဖက် ကုမ္ပဏီများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် ၎င်းနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေသော မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အချို့ကို အခါအားလျော်စွာ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေမည် မဟုတ်ပါ။
(1) အဖွဲ့ဝင်များ။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို OPPO ၏ အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီများနှင့် မျှဝေကောင်း မျှဝေပါမည်။ လိုအပ်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာ မျှဝေမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ မျှဝေရာတွင်လည်း ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ မျှဝေပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များကဖြစ်စေ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက် အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ထပ်မံတောင်းခံပါမည်။
(2) ခွင့်ပြုချက်ရ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ မျှဝေခြင်း။ ဤသီးသန့် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ရ မိတ်ဖက်များက အပြည့်အဝ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုအပြင် သုံးစွဲသူ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ရ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များတွင် ဆက်သွယ်ရေး ကယ်ရီယာများ၊ OPPO ၏ ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ၊ ကလောက်ဒ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများ ပါဝင်ပြီး ကန့်သတ်မထားပါ။ ဥပမာ လုံခြုံရေး စင်တာ အက်ပ်ကို သင် အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ဖုန်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိ စကန်ဖတ်ရန်နှင့် သိုလှောင်ခန်း နေရာရှင်းပေးရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများကို အသုံးပြုပါသည်။ သင်၏ ချို့ယွင်းမှု စာရင်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ မှတ်တမ်း အချက်အလက်များကို ပြင်ပ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများထံဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ အက်ပ်များ၏ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများထံဖြစ်စေ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
(3) လုပ်ငန်း ပေါင်းစည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဒေဝါလီခံ၍ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သည့်အခါ နှင့် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းရမည်ဆိုပါက သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားမည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း အသစ်အနေဖြင့် ဤသီးသန့် မူဝါဒထဲတွင် ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို ဆက်လက်လိုက်နာရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို သင်၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို ထပ်မံတောင်းခံစေပါမည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းခြင်း မပါဝင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို အလုံးစုံ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါ မဖော်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သော နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအား သင့်လျော်သော လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆောင်ရွက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါ အခြေအနေများတွင်သာ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါမည်
(1) သင်၏ ရှင်းလင်းပြည့်စုံသော သဘောတူညီချက်ကို ရယူပြီးနောက် သို့မဟုတ်
(2) တရားဥပဒေအရ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သမ္မန်စာများ သို့မဟုတ် အခြားဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တရားစွဲဆိုမှုများ သို့မဟုတ် အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်၊ သင် သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန်၊ လိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းက လိုအပ်သည်ဟု စိတ်ရင်းအစစ်အမှန်ဖြင့် ယုံကြည်လျှင် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးပုံ
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်၍ ဖြစ်နိုင်သော လုံခြုံရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပေးထားသော်လည်း မည်သည့်ဝဘ်ဆိုက်၊ အင်တာနက်မှ ထုတ်လွှင့်ပေးပို့မှု၊ ကွန်ပျူတာ စနစ် သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကမျှ အပြည့်အဝ လုံခြုံမှုမရှိကြောင်း သတိပြုပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အပြင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက် သုံးစွဲခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဒေတာများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ရန် လုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် အညီဖြစ်သည့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးရန် အောက်ပါတို့ အပါအဝင် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်၍ လက်တွေ့ကျသော အဆင့်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
(1) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်းရန် SSL နှင့် အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စနစ်ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်းအား ကာကွယ်တားဆီးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက် စုစည်းရယူမှု၊ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှု (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အပါအဝင်) အလေ့အထကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါမည်။
(2) ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် OPPO ဝန်ထမ်းများအား သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေတွင်သာ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ခွင့်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း သိရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေတွင်သာ ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ထမ်းများနှင့် (OPPO က လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏) ပြင်ပဝန်ထမ်းများသည် စာချုပ်အရ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရမည့် တာဝန်များကို တစ်သွေမတိမ်း ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုပါသည်။ ၎င်းတို့က ဤတာဝန်များကို ကျေပွန်ဆောင် ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ပါက တရားဥပဒေအရ ပေးလျော်ရန်တာဝန်များကို တာဝန်ခံရနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် OPPO နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို ရပ်စဲလိုက်နိုင်ပါသည်။
(3) သင့်အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အချက်အလက် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပို့ခြင်းအတွက် အပြည့်အဝ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်းပေးခြင်းကဲ့သို့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်၊ သင့်အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားပါမည်။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်းထားသည့် ဒေတာ အကြောင်းအရာအချို့ကို သုံးစွဲသူကလွဲ၍ မည်သူကမျှ ဝင်ရောက် သုံးစွဲခွင့် မရှိပါ။
(4) ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ သတ်မှတ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ပေးပို့ရန်နှင့် သိမ်းဆည်းရန် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်းခြင်းအပြင် အခြားလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေး ဇီဝရုပ်လက္ခဏာ အချက်အလက်များကို မသိမ်းဆည်းမီ စီမံဆောင်ရွက်ရန် နည်းပညာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသုံးပြုပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်ရေး ဇီဝရုပ်လက္ခဏာ အချက်အလက်များ၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ သိမ်းဆည်းပါမည်။
(5) ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူများကို နှိုင်းချင့်စဉ်းစား၍ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြား လုပ်ငန်း စာချုပ်များ သို့မဟုတ် စာရင်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် အကဲဖြတ်ချက်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းပါမည်။
(6) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်း ဝန်ထမ်းများ ပိုမိုသိရှိလာစေရန် လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု သင်တန်းများ၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် အသိပေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(7) သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိအောင် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြု စံနှုန်းများကို အသုံးပြုပါမည်။
3. ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကို သင့်ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါမည်။ လုံခြုံရေး ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ အခြေခံ အခြေအနေနှင့် ယင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မည့် ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးစေရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ၊ သင့်အတွက် ကုစား ဖြေရှင်းနည်းများ စသည်ဖြင့်။ ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သော သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေကို အီးမေးလ်၊ စာ၊ ဖုန်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်ပို့သော အသိပေးချက်ဖြင့် သင့်ကို အချိန်မီ အကြောင်းကြားပါမည်။ ကိုယ်ရေး ချက်အလက် ပိုင်ရှင်များထံ တစ်ယောက်ချင်းစီ အကြောင်းကြားရန် ခက်ခဲနေသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်ပြီး ထိရောက်သော နည်းလမ်းဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါမည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နေစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေး ချက်အလက် လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဖြစ်ရပ်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင်များ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထိထိရောက်ရောက် သတင်းပေးပို့ပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
OPPO သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်အခွင့်အရေးများကို လေးစားပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် သင်၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးများအပြင် ဤအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက် စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ တောင်းဆိုချက်ကို စီမံဆောင်ရွက်မပေးမီ လုံခြုံရေးအရ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စီစစ်အတည်ပြုရန် လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သင်၏ တောင်းဆိုချက်က ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်မှုရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံမှ မည်သည့်အဖိုးအခကိုမျှ မကောက်ခံပါ။ သို့ရာတွင် အမှန်တကယ်အခြေအနေကို လိုက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖန်တလဲလဲ တောင်းဆိုမှုများအတွက် သို့မဟုတ် ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်သော ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်သော တောင်းဆိုချက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ကာမိစေရန် အဖိုးအခအချို့ကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ လွန်ကဲစွာ ထပ်တလဲလဲ တောင်းဆိုမှုများ၊ မသင့်လျော်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု လိုအပ်သော (ဥပမာ စနစ် အသစ်တစ်ခု တီထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း)၊ အခြားသူများ၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ပျက်ပြားစေသော သို့မဟုတ် လွန်စွာ လက်တွေ့မကျသော တောင်းဆိုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပယ်ချနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်၏ တောင်းဆိုချက်သည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး၊ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် အခြား ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများနှင့် တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်နေလျှင် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်သည် သင် သို့မဟုတ် အခြားလူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဥပဒေကြောင်းအရ အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်စေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
1. အကြောင်းကြားခံရပိုင်ခွင့်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ စီမံဆောင်ရွက်သည်ကို အသိပေးရန် ဤသီးသန့် မူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြန့်ချိရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
2. ဝင်ရောက် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဖန်သားပြင်မှနေ၍ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ရှာဖွေ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်ဆိုင်ရှိ သင်၏ မှာယူမှုမှတ်တမ်းများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရန် သင့်အကောင့်ထဲသို့ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်ဘာသာရှာဖွေ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သုံးစွဲ၍ မရလျှင် သို့မဟုတ် ဒေတာများ ရယူအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင် ပြဿနာတစ်ခုခုကို သင်ကြုံတွေ့ရလျှင် privacy@oppo.com ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ ဆက်သွယ်ကာ ဝင်သုံးခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။.
3. အမှားပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်။ သင့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ စီမံဆောင်ရွက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များက မှန်ကန်တိကျမှု မရှိ သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှု မရှိဟု သင် တွေ့ရှိလျှင် ၎င်းကို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲပေးရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် သင်သည် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် စာမျက်နှာတွင် ၎င်းကို တိုက်ရိုက် အမှားပြုပြင်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင် ပြုပြင်၍ မရနိုင်သော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအတွက် သင်သည် privacy@oppo.com ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ ဆက်သွယ်ကာ အမှားပြင်ပေးရန် သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
4. ဖျက်ပစ်ပိုင်ခွင့်။ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် သီးသန့်မူဝါဒကို ချိုးဖောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းရယူနေသည်။ သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ပိုင်ခွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်။ သင် ပေးပို့ထားသည့် ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ဖျက်ပစ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ပိုင်ရှင်မည်သူမည်ဝါ မဖော်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ရန် privacy@oppo.com ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ ဆက်သွယ်ကာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
5. သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်။ ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းသည် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို လိုအပ်ပါသည်။ (ဤသီးသန့်မူဝါဒ၏ "သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူ အသုံးပြုပုံ" ကဏ္ဍကို ကိုးကားဖတ်ရှုပါ)။ ထပ်ဆောင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းရယူမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် သင်၏ခွင့်ပြုချက်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို အချိန်မရွေး ပေးအပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်ထံ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
သင်၏ သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းရန် သင့်သဘောတူညီချက်သည် ထိုသို့ မရုပ်သိမ်းမီ သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား စီမံဆောင်ရွက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဆက်လက်စုစည်းရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ပေးအပ်ထားသည့် ခွင့်ပြုချက် အတိုင်းအတာကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ချက်က အချက်အလက်များ ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
6. မကျေနပ်ချက် တိုင်ကြားပိုင်ခွင့်။ 4001666888 ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုထံ ဆက်သွယ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မကျေနပ်ချက်ကို တိုင်ကြားပိုင်ခွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။ သင်၏ တိုင်ကြားချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ 15 ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က အကြောင်းပြန်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်ကို သင့်အနေဖြင့် ကျေနပ်မှု မရှိပါက အထူးသဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံဆောင်ရွက်နေမှုသည် သင်၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးများကို ဖျက်ဆီးနေလျှင် ဆိုက်ဘာရပ်ဝန်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ဌာန၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ဈေးကွက် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဲ့သို့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင်များထံ မကျေနပ်ချက်ကိုလည်း တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အစီရင်ခံနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ရေးနယ်မြေရှိ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆို တိုင်တန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ကလေးများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပုံ
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် အဓိကအားဖြင့် အရွယ်ရောက်သူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးငယ်များသည် (အသက် 14 နှစ်အောက် ရှိသူများကို ကလေးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်) ၎င်းတို့၏ မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများ၏ သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မရပါ။ မိဘများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် စုစည်းရယူထားသော ကလေးများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ သို့မဟုတ် မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများ၏ ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသော သဘောတူညီချက်ဖြင့် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကလေးငယ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါမှသာ ဤအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပါမည်။
2. ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပြီး မှန်ကန်ကြောင်း စီစစ်အတည်ပြုနိုင်သည့် မိဘသဘောတူညီချက်ကို မရယူဘဲ ကလေးငယ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူနေသည်ဟု ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဖျက်ပစ်ရန် လိုအပ်သည့်အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ
1. OPPO ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်များသို့ သွားရောက်မည်။ မသွားရောက်မည်။ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံမည်။ လက်မခံမည်ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ "ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖော်လိုလုပ်ပါ" လုပ်ဆောင်ချက်သည် OPPO တင်ထားသော ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေး အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်မည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် လူမှုမီဒီယာ အကောင့်များသို့ ရောက်သွားစေပါသည်။
2. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဤမူဝါဒဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ သီးသန့် မူဝါဒနှင့် ဒေတာကာကွယ်ရေး မူဝါဒများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းသို့ မပေးပို့မီ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ရေး မူဝါဒများကို ဖတ်ရှုပြီး သဘောပေါက် နားလည်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ပြီး သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းပုံ
နိုင်ငံတကာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းမြစ်များနှင့် ဆာဗာများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများတွင် ဒေတာ စင်တာများ တည်ဆောက်ထားကာ ဒေသတွင်း ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအပြင် သင်၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုသည့် နိုင်ငံ/ ဒေသ ပြင်ပရှိ တရားစီရင်ရေး နယ်မြေများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိုနယ်မြေများမှ ဝင်ရောက် အသုံးပြုခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
မတူညီသော ဒေတာကာကွယ်ရေး ဥပဒေများတွင် မတူညီသော အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများ ရှိသည်ကို သင်သဘောပေါက် နားလည်ရပါမည်။ ထိုသို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူသည့် ဒေတာများကို ဤသီးသန့် မူဝါဒနှင့်အညီ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံ/ ဒေသနည်းတူ ကာကွယ်ပေးထားကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဥပမာ သင်၏ ကိုယ်ရေး ဒေတာများကို နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်၍ လွှဲပြောင်းရန် သင့်ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းခံမည်ဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်ကုဒ် ပြောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အထောက်အထားကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်၍ ဒေတာများ မလွှဲပြောင်းမီ လိုအပ်သော ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေတာလက်ခံသူနှင့် လက်မှတ်ထိုးခြင်း/ သဘောတူညီချက်များ မျှဝေခြင်းကဲ့သို့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ဤသီးသန့် မူဝါဒကို မည်သို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသီးသန့် မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မွမ်းမံခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပ်ဒိတ်များအကြောင်း အသိပေးချက်ကို မတူညီသော ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် သင့်ထံပေးပို့ပါမည်။ သီးသန့် မူဝါဒတွင် အဓိက ပြောင်းလဲမှုများရှိပြီး သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ်လိပ်စာ ပေးထားလျှင် ပြောင်းလဲမှုများ စတင်မသက်ရောက်မီ သင့်ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသိပေးချက်ကို ပြသကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်များမှတစ်ဆင့် အသိပေးချက်များကို သင့်ထံ အလိုအလျောက် ပေးပို့ပါမည်။
ဤသီးသန့် မူဝါဒကို ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်၏ ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသီးသန့်မူဝါဒအောက်ရှိ သင့်ရပိုင်ခွင့်များကို လျော့ပါးစေမည် မဟုတ်ပါ။
ဤတွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် OPPO ၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်အသုံးပြုသည့် ဖုန်းအမျိုးအစား၊ စနစ်ဗားရှင်းများ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံပြီး ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည် အတည်ပြုထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ် သင့်ဖုန်းထဲနှင့် စနစ်ထဲတွင် အသုံးပြုထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်သာ မှီခိုအားထားရပါမည်။
အထက်ပါ သီးသန့် မူဝါဒကို သင်သဘောမတူလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း သင့်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်း ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းနှင့် ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် သင့် OPPO ဖုန်းကို ဝယ်ယူခဲ့သော အရောင်းဆိုင်၏ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဝန်ထမ်းကိုလည်း သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး စတင်အသုံးမပြုရသေးလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ပစ္စည်းပြန်လည်အပ်နှံခြင်းနှင့် ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ကို မေတ္တာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဖုန်းကို ဝယ်ယူပြီး ခုနစ်ရက် ကြာပြီးသည့်တိုင် SIM ကတ်ကို ထည့်ပြီး ဖုန်းကို အသုံးမပြုရသေးခြင်း၊ ဖုန်းသုံးစွဲသူအမည်နှင့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို စာရင်းမသွင်းရသေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပြီး ( ပြင်ပထုပ်ပိုးထားသည့်ဘူး၊ ဖုန်း၏ ပြင်ပအခြေအနေနှင့် အတွင်းဘက် တည်ဆောက်မှု ပုံစံတို့ ပါဝင်ပြီး ကန့်သတ်မထားပါ) မိုဘိုင်းဖုန်း၏ အခြေအနေသည်လည်း ဖုန်းကို သင ဝယ်ယူခဲ့စဉ်က အခြေအနေအတိုင်း ပကတိ ရှိနေခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးသန့် မူဝါဒ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်း သို့မဟုတ် သံသယ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ အောက်ပါ လိပ်စာ၌ ဆက်သွယ်ပါ။
18 Haibin Road၊ Wusha၊ Chang'an Town၊ Dongguan၊ Guangdong၊ China